ပုရွက်ဆိတ်တကောင်ကြောင့် ကလေးငယ်တဦး၏ မျက်လုံးတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးရလုနီးပါဖြစ်ခဲ့သည့် သတိပြု စရာဖြစ်ရပ်တစ်ခု...! - Myanmar Kid World ပုရွက်ဆိတ်တကောင်ကြောင့် ကလေးငယ်တဦး၏ မျက်လုံးတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးရလုနီးပါဖြစ်ခဲ့သည့် သတိပြု စရာဖြစ်ရပ်တစ်ခု...! ~ Myanmar Kid World
ပုရွက်ဆိတ်တကောင်ကြောင့် ကလေးငယ်တဦး၏ မျက်လုံးတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးရလုနီးပါဖြစ်ခဲ့သည့် သတိပြု စရာဖြစ်ရပ်တစ်ခု...!
12:41 AM ကလေးကျန်းမာရေး
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ၂နှစ်အရွက်ခလေးငယ်တစ်ဦးအား ပြင်ပဆေးခန်းတစ်ခုမှ ဆေးရုံကြီးတစ်ရုံရဲ့ အရေးပေါ်
ဌါနသို့ လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့ လက်ဝဲဘက်မျက်လုံးဟာဆိုးရွားစွာရောင်
သည့်အခါတွင်လည်း 0.1အထိကျဆင်းပြီး အမြင်အာရုံကွယ်လုနီးပါးအထိဖြစ်နေတာကို စိုးရိမ်ဖွယ်တွေ့ 
ကလေးငယ်၏မျက်လုံး မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဤမျှအထိဖြစ်ပျက်ခဲ့ရသည်အား မိဘဖြစ်သူများမှလည်း တိကျရေရာသည့်ဖြစ်စဉ်ကို သမားတော်များအား ပြန်လည်မပြောပြနိုင်ခဲ့ပါ။ ကလေးငယ်အား မေ့ဆေးပေးပြီးနောက် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူများဆိုလျှင်တော့ ထုံဆေးဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်) အဆိုပါမျက်လုံးအား အသေးစိတ်စစ်ဆေးကြည့်သည့်အခါတွင်တော့ ပုရွက်ဆိတ်သေတစ်ကောင်အား ပိုင်းပြတ်လျက် အစိတ်အပိုင်း ၃ခုအား မျက်ကြည်လွှာအား ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်ထားသည့်အနေအထားဖြင့်
တွေ့ ရှိရပါတယ်။ အသက် ၂နှစ်အရွယ် ငယ်ရွယ်လွန်းသည့်ခလေးငယ်ဖြစ်သောကြောင့်လည်း အကြောင်းရင်းဖြစ်စဉ်အား ကောင်းစွာပြန်လည်ပြောပြနိုင်စွမ်းမရှိပါ။
အထက်ပါ ဆေးလောကလက်တွေ့ ဖြစ်စဉ်အားအခြေခံလျက် အောက်ပါ သတိပြု သင့်သောအချက်တချို့ အားအသိပေး ပြောကြားလိုပါတယ်။
၁။ မိမိရင်သွေးငယ်အိပ်စက်သည့်နေရာဝန်းကျင်တွင် ပုရွက်ဆိတ်၊ပိုးကောင်ငယ်များ တွေ့ ရှိရပါက ခလေးငယ်များရဲ့ နားရွက်၊မျက်လုံး၊နှာခေါင်း (အရေးပေါ်ဌါနများတွင်တွေ့ ရှိရသည့်ဖြစ်ပွါးမှု
နှုန်းအနည်းအများအလိုက်-နားတွင်း ဝင်ရောက်မှု အများဆုံးဖြစ်) တွင်းသို့ အချိန်မရွေးဝင်ရောက်ပြီး
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သည်ကိုသတိပြု ပါ။ မျတ်လုံး၊နားရွက် နာကျင်/ရောင်ကိုင်းနီရဲခြင်းဖြစ်ပွါးပါက
ဆေးမြီးတိုဖြင့်ပြီးစလွယ်မဆောင်ရွက်ဘဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ကျွမ်းကျင်သည့်သမားတော်များထံတွင်ပြသ
စစ်ဆေး ကုသမှု ခံယူပါ။
၂။ ခလေး/လူကြီးမဟူ မျက်လုံးအတွင်းသို့ပိုးကောင်ငယ်၊အရာဝတ္တု အမှတ်မထင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါက လုံးဝ(လုံးဝ) မပွတ်မိစေရန်အထူးသတိပြု ပါ။ လူကြီးများအနေဖြင့်မူ ပုရွက်ဆိတ်၊ပိုးကောင်ငယ်များ မျက်လုံးအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါက အများစုမှာ အတွင်းတွင်ပိတ်မိပြီး သူ့ ဘာသာသေဆုံးသွားလေ့
ရှိသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တုန့် ပြန်မှု သဘာဝအရ မျက်ရည်စီးကျလာသည့်နည်းလမ်းဖြင့် သူ့ ဘာသာ ထွက်ကျလာသည့်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ပိုးကောင်ငယ်သေဆုံးသွားပြီး မျက်ရည်များနှင့်အတူ မထွက်လာခဲ့ပါက ကျွမ်းကျင်သည့်သမားတော်များထံပြသပြီး ထုတ်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ်။ပုရွက်ဆိတ်/ပိုးကောင်ငယ်များသေဆုံးပြီးနောက်၎င်းတို့ ကိုယ်တွင်းမှ
ထွက်ပေါ်လာသော အရည်ကြည်တွင်ပါဝင်သည့် "Toxin" နှင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှား အချို့ ကြောင့် ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းဆိုးရွားရခြင်းဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
၃။ နားရွက်အတွင်းသို့ပိုးကောင်ငယ်များဝင်ရောက်သည့်အခါတွင်တော့ အများသိပြီးသည့်အတိုင်း သန့် စင်သောအုန်းဆီ၊ဟင်းချက်ဆီများ ကနဦးလောင်းထည့်ပြီး ပိုးကောင်ငယ် မလှုပ်ရှား၊သေဆုံးသည့်
အခါတွင်မှ ကျွမ်းကျင်သည့်သမားတော်ထံတွင်ပြသပြီး စနစ်တကျ ထုတ်ယူသင့်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောလပိုင်းက လူရွယ်တစ်ဦး နားရွက်အတွင်းသို့ ပိုးဟတ်ငယ်အကောင်လိုက်ဝင်ရောက်သွားပြီး
အရေးပေါ်ဌါနသို့ ရောက်လာသဖြင့် ကျနော်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
ခန္ဓာဗေဒသဘောတရားအရ နားအတွင်းဖက်ဆုံးတွင် နားစည် ခံထားသဖြင့် ဆီလောင်းထည့်ခြင်းသည့် မည်သည့်ဆိုးကျိုးကိုမျှမဖြစ်စေဘဲ လောင်းထည့်လိုက်သော ဆီသည် ဦးခေါင်းအတွင်းဖက်သို့ တိုင်စီးဝင်သွားနိုင်သည်ဆိုသော အရပ်ဖက်အယူအဆကြောင့် ဆီမလောင်းထည့်ရဲဘဲ အလျဉ်းသင့်ရာ နားကြပ်တံ၊ညှပ် စသည်တို့ ဖြင့် နားအတွင်းရှိပိုးကောင်ငယ်အား ဆွဲယူဖယ်ရှားခြင်းမှာ လုံးဝကို မလုပ်သင့်သောအရာဖြစ်ပါတယ်။
Myanmarload မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။